गल्फ्रेड वा श्रीमती गर्भवती हुनुभयो कि? थाहा पाउनुहोस् सजिलै टुथपेस्ट र चिनीबाट(भिडियो सहित)
कुनै नियोजित ढंगले गर्भ रहन्छ, कुनै चाहि अप्रत्यासित वा योजना बिना नै । कतिले नचाहादा-नचाहादै गर्भ रहन्छ । यसरी रहने अनिच्छित गर्भले दम्पीतमा तनाव पैदा गर्छ ।
चाहे योजनाबद्ध ढंगले होस् वा बिना योजना नै, गर्भ रहे/नरहेको कुरामा दम्पतीमा कौतुहलता हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रेग्नेन्सी टेस्ट गराइन्छ । यसैले गर्भ रहेको/नरहेको छिनोफानो गर्छ । बजारमा प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट तथा केहि उपकरण उपलब्ध छ, गर्भ रहे/नरहेको जााच्न । यद्यपी कतिपय महिला प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्न लाज मान्छन् । तिनै महिलाको लागि उपयोगी हुनसक्छ, यी घरेलु काइदा, जसबाट गर्भ रहे/नरहेको सहजै जााच्न सकिन्छ ।
के छ त वीधी
जो कोहिको घरमा चिनी हुन्छ र टुथपेस्ट पनि । हाम्रो दैनिक प्रयोगमा आउने चिज हुन् यि । अब त्यही टुथपेस्ट एवं चिनीबाट आफ्नो गर्भ रहे/नरहेको थाहा पाउनुहोस् ।
सबैभन्दा पहिला डिस्पोजल एवं प्रयोग गरिसकेपछि फ्याक्न मिल्ने कुनै चिजमा टुथपेस्ट राख्नुहोस् । त्यसमा केहि मात्रामा आफ्नो पिसाब मिसाइदिनुहोस् । केहि समयपछि हेर्नुहोस्, यदि टुथपेस्ट मैला जस्तो वा हल्का नीलो रंगको
बाकी भिडियोमा हेर्नुहोस्
एक करोडमा रेडक्रस उपशाखा भवन
यी ४ राशी हुने व्यक्ति सबैभन्दा धनी हुन्छन् ! कसरी जानिराखौं